9 Nzira dzaunokwanisa Kukurisa Dhiviriro Yako Yezvirwere Panguva Yechirwere - Fitness Repates
musha » Blog » 9 Nzira dzaunokwanisa Kukurisa Dhiviriro Yako Yemukati Mechirwere Pachirwere
Pave paine dzakawanda nyaya dzekunetsana dzichitenderera nezve COVID-19. Zvakangodaro, nzwisiso yekutanga ndeyekuti chirwere ichi chekufema chinokonzeresa kufa kune vanhu vane immune system isina simba kana mune avo vane mamwe matambudziko aripo ehutano.
Nekudaro, hazvishamise kuti mamirioni avanhu akangoerekana afarira hutano hwavo uye vanoshuvira kusimudzira masimba emumuviri. Kana iwe ukatora nzira dzinodiwa, nhau dzakanaka ndedzekuti iwe unogona kusimbisa kuzvidzivirira kwemuviri wako munguva pfupi.
Hedzino nzira 9 dzinokuratidza kuti ungawedzera sei immune system yako panguva yedenda! Aya matipi e9 ekudzivirira kukurudzira achakupa muganho munguva ino yese yedenda.
1. Vitamini C
Isu tese tinoziva kuti iyi ndiyo inonyanya kurudzirwa vhitamini yekurwisa kutonhora uye kudzivirira furuwenza. Nekudaro muviri wemunhu hauna kugona kuchengetedza vitamini C. Naizvozvo, iwe unozofanirwa kutora muvhitamini C unowedzera zuva nezuva. Iyo inogona kunge iri piritsi inowoneka, gummies, kana mhando inonyungudika mumvura yakaita seEmgengen-C.
Munguva dzino dzinotyisa, uri nani kutora dosi yako yezuva nezuva kuburikidza neyekuwedzera, pane kuyedza kuzadzisa zvaunoda zvezuva nezuva nekugun'una muto weorenji kana kuchema pa broccoli.
Iyo inowanzo kuregererwa zvicherwa, zinc ine huwandu hwebhenefiti. Muviri wako haugone kuzviburitsa. Iwe unofanirwa kuishandisa nesimba.
Iwe unogona nyore nyore kutenga zinc zvekuwedzera kubva kune yehutano shopu online kana kunze kwewebhu. Ingori muzana yezuva nezuva inodikanwa kuchengetedza huwandu hwehutano hwakanaka.
Zinc ichabatsira kukurudzira immune system yemuviri wako, kuderedza kuzvimba, kukurumidza kuporesa uye kuderedza njodzi dzechirwere chine hukama nezera. Izvi zvakakosha kunyanya ikozvino nekuti vanhu vakuru vanonyanya kutarisana neCOVID-19.
Probiotic ichavandudza hutano hwako uye semhedzisiro, kuramba kwako kuchawedzera simba. Inobatsira mukugadzirwa kwemasoja ekudzivirira chirwere uye zvakare inoderedza matambudziko mazhinji ehutano hwekufema. Iwe zvechokwadi unoda kuve uchidya probiotic.
Yogurt, miso, kombucha, kimchi uye tempeh zvakanakisa mapiritsi anogona kuve mukati mekudya kwako.
4. Garlic Mafuta Anowedzera
Garlic chinhu chinodzivirira, uye iyo allicin inosanganisira ine zvivakwa zvekurapa. Garlic ndechimwe chezvinhu zvakasarudzika chikafu uye chinoita zvishamiso mukudzivirira hosha nekusimudzira hutano huzhinji.
Iwe unogona kuwana zvimwe kubva kuchitoro chehutano uye kutora mune capsule kana 2 zuva-kusvika-zuva. Kunyangwe kudya garikisi kuri kukuru, chinowedzerwa chiri nyore kwazvo uye zvirinani sezvo iwe uchizoda kutora mune yakawanda gariki kuti uwane iwo iwo chaiwo iwoyo eallicin yaunogamuchira kubva kune capsule.
Uri kuyedza kubvisa COVID-19, kwete Dracula. Zviri nyore kumedza piritsi zvichaita.
5. Kudzidzira muviri
Kuzvinyararira hazvireve hibernation. Kurovedza muviri kunowedzera kusasimba kwako nekuita kuti kutenderera kweropa rako kuenda uye nekuvandudza simba rako uye kutsungirira.
Kunyangwe iwe wakanamatira pamba, kune matani ekudzidzira kumba iwe aunogona kuita kuti uwane kurovedza muviri kwezuva nezuva. Enderera uye edza zvirongwa zvekudzidzira imba seP90X kana Insanity Max. Iwe unozoshamisika nekuoma kuri kuita zviitwa izvi. Ita zvaunoshandisa kubva mukuchengetedza uye nyaradzo yeimba yako pachako! Pisa macalorie uye utore iwo endorphin neBeakody paDhimoni!
Cherekedza kuti kurovedza muviri kwakanyanya kunogona kudzikisira kusasimba kwako. Saka, kuroja zuva nezuva asi usazvikurira. Ne coronavirus ichipoterera, haudi immune system yemuviri.
Kana iwe uchitsvaga inonakidza yekurovedza chirongwa yakanangana nevakadzi, isu tinokurudzirawo Danette May's Flat Belly Inokurumidza DVD iyo yaanopa pachena mahara kwenguva pfupi chete. Zvese iwe zvaunofanirwa kubhadhara imo muto diki wekutakura.
Aaron naPaul gara wega Workout chirongwa iri zvakare sarudzo huru. Mumaminetsi makumi mapfumbamwe chete pasvondo, ino iri online, chirongwa chekudzidzira kumba chinobatsira iwe kurovedza muviri pasina yekurovedza muviri zvinoreva kuti unogona kupinda muchimiro, kurasikirwa uremu, uye kukura nesimba panguva yeCoronavirus Quarantine.
Rovedza muviri kudikitira uye kuita kuti moyo wako urambe uchipomba, asi usazvishandire zuva nezuva kusvika pakuneta uye mutero wako mukuru wekutya zvisina basa.
Wana maawa manomwe kusvika masere ehope zuva nezuva. Muviri wakazorora zvakanaka une hutano hwakawanda uye hwakawanda simba.
Paunodurura makirogiramu ako akawandisa, hutano hwako huchavandudzika. Nezvekudya zvese zvekudya muzvitoro, zvino yakwana nguva senge chero ipi neipi yekutora chirongwa chekutsanya chekuti uderedze uremu.
Kufungisisa kuti kutsanya kwekumbopota kuri nezvei? Kutsanya kusingagumi hakusi nezve izvo zvaunodya… zvakanyanya nezve nguva yekudya masikati. Icho chiri chimiro chekudya chinotenderera pakati penguva dzekutsanya uye kudya. Izvo hazvitsanangure kuti ndezvipi zvekudya zvaunofanira kudya asi asi kuti unofanira kuzvidya riini. Panyaya iyi, haisi chikafu mune yakasarudzika pfungwa asi zvinonyatsotsanangurwa senzira yekudya.
Tenda RFL yakanaka vhiki gumi nemaviri yekutsanya chirongwa chaunogona kutanga nacho kubva mukunyaradza kweimba yako. Inouya neyakatsanangurwa magiraidhi, makaseti, zvirongwa zvedzidzo uye zvakawanda zvinokuratidza izvo chaizvo zvaunofanira kuita kuti urasikirwe nemafuta emuviri, kuchengetedza tsandanyama, uye kuvaka yakatsiga, yemitambo muviri.
Kudzivirirwa kwemuviri wako kuchawedzera simba uye hutano hwako hunovandudzika zvakanyanya kana ukatevera chirongwa chakaringana chekudya uye kuita nzira yako kuenda kune yako yakakodzera uremu. Kana iwe ukadya saladi (iyo yatinokurudzira) sechikamu chehurongwa hwekurasikirwa uremu, tinokurudzira kuti utarise yepamusoro salad yekupfeka zvipfeko zvehuremu.
8. Kuputsa Kupindwa muropa
Rega kuputa fodya. Deredza kunwa kwako. Dura shuga yako yekudya uye chinangwa chekusiya chero hupi hutano hwaungave uhwo.
Zvichava zvakaoma… asi izvo zvinotarisirwa. Gamuchirai kuoma uye kurikunda. Kana tsika dzinokuvadza idzi dzangobviswa, unozonzwa uye woita kunge nyowani nyowani kwauri.
9. Mumwe wega Hutsanana
Hutsanana hwakakosha sekugeza maoko ako nguva dzese, kusabata kumeso paunenge uri panze nekugezesa nguva yaunosvika kumba zvese zvakakosha asi zviito zviri nyore zvinowedzera muviri wako immune system.
Paunosvika kumba kubva kunze, USAGARA pamubhedha kana pamubhedha. Iwe haunzwisise kuti chii hutachiona pazvipfeko zvako… uye haufanire kuzviparadzira kune zvimwe zvigadzirwa mumba mako. Isa zvipfeko zvako mumuchina wekuwachisa ipapo, geza, wozopfeka dzimwe mbatya dzakachena.
Nekugamuchira aya matipi mapfumbamwe ekuti ungakwidziridze sei immune system panguva yedenda, iwe unosimudzira hutachiona hwemuviri wako uye nekuzvipa iwe mukana wekurwa ne COVID-9 kana chero chimwe chirwere chinoedza kugadzirisa mumuviri wako.